Xeebaha ugu fiican ee ku dhow Lisbon
Yurub Portugal Lisbon
Marka aad ka fekerto caasimadaha yurub, xeebaha berriga ah maaha waxa ugu horeeya ee maskaxda ku haya. Lisbon, inkastoo, uu ka duwan yahay. Goobta galbeedka ee qaaradda, oo leh roobab qorrax leh oo badanaa sanadka, magaaladu waxay ku barbaarantaa dabbaaldoonno xeebo ah oo kuyaala bartamaha magaalada.
Beerta Atlantic waxay labadaba duco iyo habaar u tahay qorraxda qorraxda ee Lisbon. Dhinaca kale, mawjadaha duufaanku waxay keenaan ciid dahab ah badi xeebaha magaalada, halkii ay ka iman lahaayeen dhagaxyada iyo dhagaxyada ka soo horjeeda badaha xeebaha Badda.
On the downside ah, biyaha waa la yaab leh qabow, xitaa ee height ee xagaaga. Haddii aad rabto in aad hesho meel aad naftaada usbuuc dhammaadka ah ee mashquulka ah, meesha ugu fiican waxaa laga yaabaa in dhowr cagood oo daadka ah!
Iyadoo aan loo eegin, xulashooyin badan oo boodh ah oo ay kala dooran karaan, had iyo jeer ma fududa in la soo qaato ugu fiican. Waxaan soo saarnay afar ka mid ah xeebaha sare ee magaalada oo dhan, mid waliba wuxuu leeyahay 'wax gaar ah' taasoo ka dhigaysa inuu u istaago dadka maxalliga ah iyo martida.
Midkoodna waa in ka badan saacad meelkasta oo aad u badan tahay inaad ku sii jireyso Lisbon .
Getty Images / Toms Pedreira / EyeEm
Marka tuulo yar oo kalluumeysi ah, Cascais ayaa isku beddelay tobanaankii sannadood ee ugu dambeeyey si uu u noqdo meel dalxiis oo midig ah.
Isbuucyada xagaaga, tareenka nus-saac ee Lisbon ee Cais do Sodre waxaa ku yaalla dalxiisayaal iyo Lisboetas , dhammaantood waxay raadinayaan ciid ah mid ka mid ah xeebaha Cascais ee xeebaha.
Sababtaas awgeed, haddii aad wakhti booqan karto booqashadaada maalmaha toddobaadlaha ah ama inta lagu jiro xilliga gu'ga ee xilliga guga iyo xilliga dayrta, waxaad yeelan doontaa qolal badan oo neefsasho ah. Waxa kale oo ay ku haboon tahay inaad iibsato tikitkaada horay haddii aad awooddo, maaddaama mashiinnada mashiinnada ay ku dheeraan karaan subaxda kulaylaha.
Ugu dhowaa qeybta weyn ee taariikhiga ah ee Cascais ayaa ku taal Praia da Ribeira. Waxa kale oo loo yaqaan 'Beach Fisherman's', oo waxaad u badan tahay inaad aragto dhowr doomood oo yaryar oo soo socda oo aadaya marka aad qaxayso. Waa deganaansho iyo amaan carruurta, inkastoo tayada biyaha aysan aheyn wax cajiib ah sababtoo ah dhaqdhaqaaqa ganacsiga.
Xeebaha waawayni waxay ku yaallaan bariga, waana sahlan tahay in la helo meelo lagu rido shukumaanka Praia da Conceição iyo Praia do Duquesa. Isku-duwashada qoyaanka hoose, labadan qaybood ee ciidadu waxay bixiyaan khibradda xeebta ee Cascais.
Markaad dayac tirto qorraxda, hubi inaad booqato caanka ah ee Gelados Santini ka hor intaadan ku boodin tareenka dib ugu soo noqoshada magaalada. Dukaankan yar wuxuu soo jeestay baraf aad u fiican oo ka badan lixdan sano.
David Santiago Garcia / Getty Images
Haddii Cascais uu aad u badan yahay, ama waxaad raadineysaa waxqabadyo biyo ku salaysan oo aad u culus marka loo eego cawska, baaskiilada kirada ama baaskiil ka soocaya baska ama taksiyada Cascais iyo madaxa dhowr mayl dheeraad ah xeebta.
Haddii aad raacdo muuqaalka N247 ama la gooyo marinka gaaban ee gudaha, waxaad si degdeg ah u arki doontaa adigoo eegaya Praia do Guincho - oo laga yaabo, in lagu garaaco dabaylaha xooggan ee ka taliya qaybtan xeebta.
Ma jirto meel hoy ah oo badan oo xeebta ah, sidaas darteed haddii neecawuhu si gaar ah u xoogan yahay, sunbooyinku waxay rabaan inay doortaan meel kale. Dareemaha xoogga leh ee xoogga leh ayaa sidoo kale samayn kara dabaasha, sidaa darteed fiiro gaar ah u yeelo calanka iyo hagaajiyayaasha haddii aad qorshaynayso inaad ku hesho baddaha.
Taa baddalkeeda, xeebtani waa goob muhiim ah oo loogu talagalay sheyga iyo, marka dabaylaha ay ku dhuftaan gebi ahaan xagaaga, xitaa shuftada. Qalabka adeegga iyo casharradu waa kuwo aan qaali ahayn, oo leh dhawr dukaamo oo kala duwan si ay u kala doortaan.
Marka aad dhammaysato, qaar ka mid ah cuntooyinka badda ugu fiican ee qeybtan dalka ayaa ku sugaya maqaayadaha u dhow, oo ay ku jiraan Fortaleza do Guincho, mid ka mid ah makhaayado dhowr ah oo ku yaala Lisbon si loogu bixiyo xiddiga Michelin . Sida qaybo kale oo badan oo ereyga ah, haddii aad ku jirtid miisaaniyad, waxaad bixin doontaa lacag ka yar marka aad ka sii dheeraato biyaha.
Bill Heinsohn / Doorashada sawirqaadaha RF / Getty Images
Waxaa laga soocaa Praia do Guincho oo ku taal woqooyi dhagax weyn, Praia badanaa Cresmina wax badan uma muuqato wadada.
Si kastaba ha noqotee, jidkaaga hoos u dhig si aad u heshid, oo waxaad ka heleysaa meel ku taal dhinaca qulqulka, oo waxaa lagu abaal marin doonaa khibrad aad u badan, oo laga heli karo xeebta.
Xeebta waxaa loo qaybiyaa meel bannaan oo yaryar ah, waxaadna heli doontaa hoyga ugu badan ee qaybta waqooyi ee u dhaxeysa Hotel Fortaleza iyo Restaurante Mar do Guincho. Hase yeeshe, ma jirto wax qurux ah, hadaba, haddii aad raadinayso makhaayadaha iyo dalladaha xeebaha, ka soo qaad qaybta koonfureed dheer.
Waxaa jira iskuul lagu cuno sigaar-cabbe, iyo si fudud oo loo heli karo makhaayado dhawr ah haddii aadan keenin nafaqadaada. Waqtiga xagaa ee xagaaga ee Lisbon, Praia do Cresmina waa meesha ugu fiican ee la joogo saacado yar ka dib. U qaado dhalo khamri ah, dhowr cunto fudud, iyo buug wanaagsan, oo aad diyaar u tahay inaad tagto!
hsvrs / E + / Getty Images
Costa Caparica waa in uu aad u jecel yahay dalxiisayaasha caalamiga ah marka loo eego. Laga soo bilaabo dhinaca koonfureed ee webiga Tagus, waa duleelka ugu dheer ee sanduuqda Portugal, qaybta ugu fiican ee kiilomitir ahaan kiilomitir ilaa dhammaadka.
Waa sahlan tahay in la gaarsiiyo, maraakiibta iyo basaska ay ka soo baxaan bartamaha magaalada, waana mid aad u yar oo xagaaga ah marka loo eego mid ka mid ah xeebaha u dhaxeeya Lisbon iyo Cascais.
Inkasta oo, dalxiisayaal caalami ah ayaa ku jira qadar yar oo ku yaala Costa Caparica. Waxaad ka heli doontaa dad farabadan ama kuwa soo booqanaya meelo kale oo ka mid ah Portugal oo isu soo qulqulaya qaybtan xeebta, gaar ahaan dhammaadka usbuuca.
Qeybta ugu mashquul badan ee xeebta ah ayaa la dhigtaa magaalada isla magaceeda. Waxay leedahay baaritaano badan, makhaayado, iyo makhaayado, lakiin waa arrin kale oo aan ku saleysneyn mooyaane haddii aadan ku sugnayn dukaameysiga alaabada. Inaad raacdo wadiiqada gudaheeda, si kastaba ha noqotee, dadkuna si deg deg ah ayey u dhuubaan.
Koonfureed dhowr kiilomitir (ama qaado tareenka yar ee xagaaga xagaaga), dhismayaashuna way dhammaataan, oo ay badalaan kalluun eucalyptus. Tani sidoo kale waa meesha aad ka heli karto goobaha khaniisyada iyo nudista, laakiin way fududahay in la helo isbeddel ballaaran oo ciid ah oo dhan naftaada. Haddii aad doorbideyso inaad sunbato qorraxda, tani waa meeshaada.
Kuwa doonaya in ay kudhowaan magaalada, waxay ku haboontahay inay lugeeyaan guddiga maamulka si ay u hubiyaan baararka xeebaha iyo makhaayadaha. Raadi miiska dibedda, dalbasho viola von or sangria, oo ka ilaali mawjadaha mugdi ku jira horay adiga oo u jiheysta gawaarida. Waxaa sidoo kale jira makhaayado quraac ah oo aan raqiis aheyn iyo fursado cunto kale oo dhowr ah oo ka soo jeeda xeebta.
Waa sahlan tahay inaad maalin dhan ku raaxaysato isku dayga xeebaha Costa Caparica, baararka, iyo makhaayadaha. Gaadiidka ka baxaya aaggu wuxuu mashquul ku noqon karaa hareeraha qorraxda, si kastaba ha noqotee, ha kaxaystaan ​​gawaarida, baska, ama cabsida buundada ilaa Lisbon horaantii galabtii, ama sug ilaa habeenku si fiican u dhaco.
9-ka Best Lisbon Hotels ee 2018
Lisbon Gay Pride 2016 - Portugal Gay Pride 2016 - Lisbon Bear Pride 2016
Dhismayaasha ugu quruxda badan Lisbon
Sida Loogu Bixiyo Lisbon Iyo Porto
Waxyaabaha Lagu Ciyaaro Lisbon, Portugal
Dharka Sandals by Martha Stewart
Jidka tareenka ugu fudud, Denver ee Westminster, hadda waa orodka
Waxa la sameeyo si deg deg ah ee Mexico
Beeraha Qaranka ee Rocky Mountains
Burburkii ugu fiicnaa ee miisaanka ee Maraykanka
Sahaminta Farshaxanka Ritz-Carlton, Millenia Singapore
Inside Atlanta: Ganacsatada Extraordinaire Justin iyo Kelly Anthony
2018 Bisha Maarso ee Kanada
10 Mukhaadaraadkii Kolkata Durga Puja Pandals
Kaniisadaha Katooliga Katooliga ah iyo kaniisadaha Queens, New York
Booqo Habka Cimilada ee Centennial Park
Talooyinka ugu sarreeya ee Tareenka Tareenka ee Yurub
5 Cuntada ugu Fiican ee isku deyeysa ee Puerto Rico